ဗေဒင် အလွယ်မေးနည်း | ကွန်ပျူ ဗေဒသုခုမ
ဗေဒင် အလွယ်မေးနည်း	# အလွယ်ဆုံး ဗေဒင်မေးနည်းPublished June 30, 2011 | By Dr.Tin Bo Bo	ကိုယ့်မှာ ပြဿနာ တစ်ခုခု ရှိလာပြီဆိုရင် ဗေဒင်ဆရာနဲ့ ပြဿနာကို အဖြေရှာချင်ကြသူများအတွက် အလွယ်ဆုံး ဗေဒင်မေးနည်းလေး တစ်ခုကို တင်ဆက်ပေးလိုက်ပါတယ်။ ဗေဒင်မေးချင်ပြီဆိုရင်လည်း ဗေဒင်ဆရာ ရှာရတဲ့ ဒုက္ခကလည်း မသေးလှဘူးဗျ။ ကိုယ်မေးချင်တဲ့ ကိစ္စကို ဟောနိုင်တဲ့ဆရာကို ရှာရတယ်။ဟောတာ မှန်/မမှန်ကို လည်း စုံစမ်းရသေးတယ်။ နောက်ပြီး ခြောက်လုံးလှန့်လုံးတွေပေး မျှော်လင့်ချက်တွေပေးပြီး “ယတြာ” နဲ့ လုပ်စားနေတဲ့ ဆရာလိမ် ၊ ဆရာတုတွေနဲ့ တွေ့မှာလည်း ကြောက်ရသေး သဗျ။
Posted in ဂမ္ဘီရ | Tagged MaHaBote, Myanmar Astrology, ကိုယ်တိုင်မေး ဗေဒင်, စာချခြင်း, တရုတ်ရိုးရာ ဗေဒင်, ယိချင်း ဗေဒင်, အလွယ်ဆုံး ဗေဒင်, ဗေဒင် အလွယ်မေးနည်း	Reports to my Friends !
# လျှပ်တစ်ပြက်ဗေဒင် (57,625)# 2012 ခုနှစ် (၁၂)ရာသီခွင် ဟောကိန်းများ (46,968)# 2013 ခုနှစ် (၁၂)ရာသီခွင် ဟောကိန်းများ (46,696)# မွေးနေ့ဗေဒင် တွက်ကြမယ် (၁) (31,344)# အလွယ်ဆုံး ဗေဒင်မေးနည်း (23,411)# (3)ဂဏန်းသမားများ အကြောင်း တစေ့တစောင်း (14,559)# (4)ဂဏန်းသမားများ အကြောင်း တစေ့တစောင်း (12,582)# (8)ဂဏန်းသမားများ အကြောင်း တစေ့တစောင်း (11,949)# (9)ဂဏန်းသမားများ အကြောင်း တစေ့တစောင်း (11,290)# ဧပြီလ (၇)ရက်သားသမီး ဗေဒင် (10,270)# ဧပြီလ အတွက် (၇)ရက် သားသမီးဗေဒင် (10,094)# ဒီဇင်ဘာလ(၇)ရက်သားသမီးဗေဒင် (10,048)# မဟာဘုတ် စစ်တမ်း (9,831)# နာမည်သည် နောက်ဆုံးအဖြေလော? (9,792)# နဂါးနှစ် လာပြီ (9,302)# ၁၂ ရာသီခွင် နှင့် လူသားများ (၂) (9,129)# သြဂုတ်လအတွက် သင်္ချာဗေဒ ဟောကိန်းများ (8,834)# အပြောင်းအလဲ များတတ်တဲ့သူ (8,488)# အောက်တိုဘာလ အတွက် (၇)ရက် သားသမီး ဟောကိန်းများ (8,184)# (1)ဂဏန်းသမားများ အကြောင်း တစေ့တစောင်း (8,156)# အောက်တိုဘာလ (၇)ရက် သားသမီးဗေဒင် (7,827)# နိုဝင်ဘာလ(၇)ရက်သားသမီးဗေဒင် (7,681)# မွေးနေ့ဗေဒင်တွက်ကြမယ် (၂) (7,562)# မတ်လ (၇)ရက် သားသမီး ဗေဒင် (7,550)# စက်တင်ဘာလ အတွက် (၇)ရက် သားသမီး ဟောကိန်းများ (7,261)# (၀)ကြွင်း မဟာဘုတ် ဖွား များ၏ ယေဘူယျဝိသေသ လက္ခဏာများ (7,239)# မွေးနေ့ မွေးရက် ထပ်တူကျခဲ့လျှင် . . . (6,899)# ၁၂ ရာသီခွင် နှင့် လူသားများ (၁) (6,685)# (၇)ရက်သားသမီးများအတွက် သြဂုတ်လ ဟောကိန်းများ (6,476)# စကား (၆) ခွန်း လူ၌ထွန်း (6,023)	အားပေးတယ်ဆို Like လုပ်ခဲ့နော် !